Mmalite mmalite nke Ramallah na-eji algọridim ebu amụma esemokwu Mideast
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Akụkọ njem Palestine » Mmalite mmalite nke Ramallah na-eji algọridim ebu amụma esemokwu Mideast
RedCrow nke dị na Ramallah enweghị kristal kristal. Mana n'ime afọ atọ gara aga mbido egosila na ọ dị irè na ịkọ esemokwu na Middle East site na iji algorithms nke ya. Ihe data ahụ bara nnukwu uru nye ụlọ ọrụ ndị ọrụ onwe ha, ụlọ ọrụ gọọmentị na ndị mmadụ n'otu n'otu chọrọ ịhazi na gburugburu ọchịchị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-agbanwe agbanwe, wee pụọ n'ụzọ ọ bụla.
N'ịbụ onye guzosiri ike na August 2014 site n'aka ndị ọchụnta ego Palestine Hussein Nasser Elden na Laila Akel, RedCrow tụụrụ ime dị ka ikpo okwu n'ịntanetị na-enye ezigbo ọgụgụ isi oge gbasara mpaghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Middle East. N'ibido na West Bank, ụlọ ọrụ ndị nwe ụlọ taa na-ekpuchikwa mmepe na Jordan na Egypt. Ndị ọrụ ikpeazụ na-enweta ozi nchekwa ozugbo na ekwentị ha, na-eji ngwa RedCrow. Data ahụ na-enyere ha aka ịme mkpebi nke abụọ, dabere na ọnọdụ nchebe ozugbo. Dị ka ihe atụ, ọ dị mma isi n’otu ebe gaa ebe ọzọ n’ụzọ ụfọdụ? Ngwa RedCrow na-enye maapụ zuru ezu na-egosi ọnọdụ nke ebe nchekwa; esemokwu na ngagharị ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ngwa ahụ na-akọkwa nkọwa dị ka onye nwere uche nke uche hụrụ ka ọ na-agba ọsọ n'okporo ụzọ.
"A na-ewu usoro anyị na usoro nke algọridim iji jide n'aka na ozi ahụ ziri ezi," ka Elden, RedCrow si bụ onye isi 31, gwara The Media Line. Algọridim na-enyocha ma nakọta ozi na ozi sitere na isi mmalite, gụnyere mgbasa ozi mmekọrịta na nchịkọta saịtị bara ụba (RSS) - usoro maka ịnyefe ọdịnaya weebụ na-agbanwe mgbe niile, ọ kọwara.
Na-anakọta data mgbe niile, usoro a na-agbanwezi ozi na ozi na-akpaghị aka na maapụ emelitere. Yiri ngwa a na-ewu ewu nke Waze, RedCrow na-egosi ọnọdụ maka ihe ọ bụla mere, yana ọnụọgụgụ na ịdọ aka ná ntị ederede, na-enye ndị ọkwọ ụgbọala ohere ịghagharị gburugburu nsogbu dịka mgbochi okporo ụzọ ma ọ bụ mgbochi okporo ụzọ.
RedCrow nwere ma ndị ahịa obodo ma nke ụwa gụnyere Amideast, Care na Hemaya.
“Ka oge na-aga, izi ezi nke ozi Redcrow na-enye ndị ahịa ya abụrụla ihe doro anya. Ọmụmaatụ, ngwa ahụ gosipụtara etu ụzọ dị iche iche siri kwado ozi niile ezigara m, ”Ziad Abu Zayyad, onye ahịa dị ugbu a na RedCrow gwara ndị Media Line. “Amaara m fọrọ nke nta ka ozugbo ihe ọ bụla merenụ na-ewere ọnọdụ na West Bank na Gaza warara. Ọrụ a na-etinye ozi niile n'otu ebe maka gị karịa ka m na-achọ ya. ”
Ọ bụ ezie na mgbasa ozi mgbasa ozi jupụtara na akụkọ ụgha, RedCrow na-enyocha ya, dabere na isi mmalite ndị a pụrụ ịdabere na ya dịka akaụntụ Facebook ma ọ bụ Twitter, na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị a tụkwasịrị obi. N'otu aka ahụ, ụlọ ọrụ ahụ na-akọ naanị maka mmepe nke ọtụtụ mmadụ gbara àmà n'otu oge na ebe. “Na mgbakwunye na ịnye ozi nchebe ozugbo, RedCrow na-enye map ndị na-enye ihe ọmụma nchekwa ogologo oge. Maka mpaghara ụfọdụ, nke ahụ na-enyere ndị ọchụnta ego aka ịme mkpebi dị mma, ”ka Elden kwuru.
Dịka, akụkọ ndị a na-agụnye akụkọ a na-akọwaghị akụkọ banyere ọdịdị na-enweghị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na nyocha echiche ọha na eze.
“Mgbe oge opupu ihe ubi Arab mere, amaara m na ọ dị mkpa maka ozi nchekwa. Anyi choro ikpo okwu iji nye ihe nchebe na akuko, ”Elden kwuru. “Mgbasa ozi adịghị mma. Ọ na-egosi ma na-ezobe akụkọ sitere na atụmatụ. ”
RedCrow's Mass Media na-achịkọta akụkọ sitere na channelụ akụkọ mba, mpaghara na mba ụwa. N'ime otutu weebụsaịtị, ụlọ ọrụ akụkọ na blọọgụ ọ na-enyocha mgbe niile bụ Haaretz, Ma'an, Alray na ndị agha nchekwa nke Israel. "Mass Media na-enyocha ozi na mpaghara dị iche iche, ma na-enye naanị ozi metụtara nchekwa dabere na ọnọdụ onye ọrụ njedebe" Laila Akel, ngalaba-nchoputa nke RedCrow gwara The Media Line.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ndekọ egwu iji meziwanye ọnụnọ nke "Palestine". Dịka ọmụmaatụ, n'oge gara aga, ndị na-eme ihe ike boro Google ebubo ihichapụ "Palestine" na Google Maps. Nke ahụ kpalitere hashtag #PalestineIsHere. Mana o doro anya na, "Palestine" enweghị akara akara na mbụ.
“Enwebeghị akara 'Palestine' na Google Maps. Agbanyeghị, anyị chọpụtara ahụhụ na wepụrụ aha mmado maka 'West Bank' na 'Gaza'. Anyị na-arụ ọrụ ọsọ ọsọ iji weghachite aha ndị a na mpaghara ahụ, ”otu onye na-ekwuchitere Google kwuru ozugbo. N'iji ọkwa Google map maka West Bank dị ka ntọala, RedCrow gbakwunyere akara ala na ebe ndị dị mkpa iji mepụta maapụ echedoro na ihe ọmụma.
Ndị otu RedCrow, nke bidoro na atọ, toro ndị ọrụ iri na atọ. "Atụmatụ anyị bụ iji kpuchie Middle East na afọ abụọ na-abịanụ," Akel kwuru.
RedCrow nwetara ego site na Ibtikar Fund - ụlọ ọrụ isi ego nke na-etinye ego na mmalite ndị Palestian.
"Ibtikar Fund tinyere ego na RedCrow maka ngwaahịa ya bara uru ma dị oke mkpa, yana ndị otu nwere ahụmahụ," onye na-ekwuchitere Ibtikar Fund gwara The Media Line. "Ibtikar ga-anọgide na-arụ ọrụ na ndị ọrụ RedCrow ka ọ na-amalite ngwaahịa na ọrụ ọzọ, ma gbasaa iji kpuchie mpaghara ahụ."
Qatar Airways: Ọ ga-agbanye?
Riversbọchị Osimiri Canada - Bịa Na-eme Canada Canada 150 nke Osimiri Canada!